Wararka Ku Saabsan Xashiishadda, CBD, Daroogooyinka, Caafimaadka, Kaydka • Dawooyinka Inc.eu
Shaquille O'Neal oo dacweeyay Shirkadda Cannabis, waxay doonaysaa in ka badan $1m magdhow ah November 27 2021 AKHRI MARKA Dhaqdhaqaaqa jireed iyo xashiishadda dawada ayaa saameyn isku mid ah leh marka loo eego daraasadda Ingiriiska November 26 2021 AKHRI MARKA Daalibaan si ay u beeraan xashiishadda November 25 2021 AKHRI MARKA
Raadi US @INSTAGRAM
Wadajir u shaqeynaya?
Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Cannabis, CBD, Shareecada iyo Sharciga
Waad la socon kartaa horumarkii ugu dambeeyay ee la xiriira daroogada, xashiishadda, CBD, sharciyeynta & saamiyada nala jooga. La soco wararkii ugu dambeeyay maalin kasta!
Intee in le'eg ayay "boqoshaada sixirka" ku sii jirayaan nidaamkaaga?
Maaddaama dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ay la kulmayaan "dib u soo noolayntooda" iyo xitaa isticmaalka caafimaad ee boqoshaada sixirka ayaa noqonaysa mid aad looga aqbalo adduunka oo dhan, qaar badan ayaa la yaaban:…
Isticmaalka bong ayaa sii caan baxay
Isticmaalka bong si loo cabbo haramaha iyo daroogooyinka kale ayaa mar kale sii baxaya. Aaway caannimadani…
Saynis yahanadu waxay soo jeedinayaan inay mudan tahay in la sii barto isticmaalka saliida CBD
CBD, Caafimaadka, Wararka
Waxaa jira caddaymo badan oo sheeko-xumo ah, laakiin cilmi-baaris cilmiyeed oo ku saabsan CBD oo loogu talagalay codsiyada daweynta ayaa maqan. Warbixin, lagu daabacay BMJ Case Reports…
Aftida xashiishka ee Talyaaniga ayaa la kullantay mucaaradka garabka midig
cannabis, Wararka, Wargeysyada caalamiga ah ee cannabis, Sharci dejinta & Sharci dejinta
Rajadii Talyaanigu u qaban lahaa aftida xashiishadda cannabis ayaa halis gashay Arbacadii ka dib markii garabka midig ee Lega…
Daraasad cusub oo ka socota Eaze, oo ah shirkad xashiishad ah oo fadhigeedu yahay California iyo suuqa, ayaa ogaatay isbeddellada soo baxaya iyo qaababka isticmaalka ee macaamiisha xashiishadda…
Daweynta niyad-jabka ee bukaanka kansarka: boqoshaada sixirka iyo Mushrooms Magic waxay muujinayaan ballanqaad
Daawooyinka dhimirku ma daweyn karaan niyad-jabka bukaanka kansarka? Haa, marka loo eego natiijooyinka daraasad caafimaad oo dhowaan laga sameeyay mawduuca. Aquilino…
MLA wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo dagaalka ka dhanka ah daroogada
Daroogooyinka, Caafimaadka, Wararka
Xubnaha golaha sharci dejinta ee British Columbia (MLA) waxay ku baaqayaan in la joojiyo dagaalka ka dhanka ah daroogada. Adam Olsen (MLA),…
Maxay saliid CBD u fiican tahay? Su'aalahaaga ayaa ka jawaabay.
Saliida CBD iyo CBD waa halkaan inay joogaan. Dhab ahaantii, caannimada badeecadaha CBD ayaa kordhay kaliya sannadihii la soo dhaafay.…
Saraakiisha ayaa qabtay gaari xamuul ah oo siday 55 milyan oo kaniiniyada methamphetamine ah iyo in ka badan 1,5 tan oo meth crystal ah, sida uu sheegay ururka dambiilayaasha ee…
Luxembourg waxay noqon doontaa waddankii ugu horreeyay ee Yurub ah ee sharciyeeya beerista iyo isticmaalka xashiishadda, dawladdu waxay sheegtay…
In kasta oo uu jiro masiibo caalami ah, silsiladaha sahayda oo khalkhal galay, sicir-bararka sii kordhaya iyo dagaalka socda ee lagu sharciyeynayo marijuana heer federaal ah,…
Daraasada Disorder Compulsive: Ketamine (CL369) Waxaa loo baadhay sidii daweyn macquul ah
Cilmi-baadhayaashu waxay daabaceen daraasad sahaminaysa sida ketamiin loo isticmaali karo si loo caawiyo bukaannada la ildaran xaaladaha ...
Daawooyinka naqshadeeyaha: macsalaamo 3-MMC
28 Oktoobar 2021
Daroogooyinka, Wararka, ka dhiman, Sharci dejinta & Sharci dejinta
Laga bilaabo maanta, mamnuucida 3-MMC ayaa ka khuseysa Nederlaan. Daroogada naqshadeeyaha khatarta ah oo aad u qabatinka leh - taas oo si xor ah looga ganacsan jiray…
Siyaasadda daroogada: Filibiin oo cadaadis kala kulmaya UN-ka oo ku saabsan dilka joogtada ah ee tuhmanayaasha daroogada
Madaxweynaha Philippine Rodrigo Duterte ayaa si buuxda u qaaday mas’uuliyadda dagaalka dhiigga badan ku daatay ee ka dhanka ah daroogada. Dagaalkan ka dhanka ah daroogada...